Sat, Jul 4, 2020 at 2:48am
काठमाडौँ, ३० जेठ विश्वकप क्रिकेटमा अर्को एउटा खेल पानीले विथोलेको छ । बिहीबार नटिङघममा हुनुपर्ने भारत र न्युजिल्याण्डको खेल पानीका कारण एक बल पनि नखेली रद्ध भयो । दुबै टिमले एक एक अंक बाँडेका छन् । यो विश्वकपमा पानीले बिथोलेको यो चौथो खेल हो । अब विश्वकपमा पानीले प्रभावित हुन बाँकी टिममा अफगानिस्तान, इंग्ल्याण्ड र अष्ट्रेलिया मात्र छन् ।..
काठमाडौं, जेठ ३० इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजनका लागि खेलतालिका सार्वजनिक भएको छ । लिग व्यवस्थापनले बिहीबार जारी गरेको खेलतालिकाअनुसार आउँदो साउन २४ गते हुने उद्घाटन खेलमा उपविजेता लिभरपुल र बढुवा भएको क्लब नर्विच सिटी भिड्नेछन् । उपाधि विजेता म्यानचेस्टर सिटीले पहिलो खेलमा वेस्टह्याम युनाइटेडसित खेल्दा तेस्रो भएर लिग सकाएको चेल्सीले पहिलो खेलमै म्यानचेस्टर युनाइटेडको सामना गर्नेछ । टोटनह्याम हट्सपरले एएफसी बर्नमाउथसित खेल्दा..
एजेन्सी, ३० जेठ । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा बिहिबार भारत र न्यूजिल्याण्डबीचको खेल वर्षाका कारण सुरु हुन सकेको छैन । वर्षाका कारण खेलको टससमेत हुन भएकाे छैन । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज भारत र न्युजिल्यान्ड भिड्दैछन् । दुवै टोली जारी विश्वकपमा हालसम्म पराजित भएका छैनन् । जारी विश्वकपमा भारतले दुई र न्यूजिल्याण्ड तीन खेल खेलेको छ । विश्वकपमा यी दुई टोलीको..
काठमाडौँ, ३० जेठ आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा अष्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई ४१ रनले पराजित गर्‍यो । उक्त खेलमा अष्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान डेविड वार्नरले शतक प्रहार गरे। १ सय ११ बलको सामना गरेका उनले ११ चौका र १ छक्काको मद्दतमा १ सय ७ रन बनाएका थिए। अष्ट्रेलियाको जितमा वार्नरको शतक महत्वपूर्ण रह्यो। एक वर्षको प्रतिबन्धपछि राष्ट्रिय टीममा फर्किएका उनको यो पहिलो शतक..
काठमाडौं, ३० जेठ । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज भारत र न्युजिल्यान्ड भिड्दैछन् । भारत र न्युजिल्यान्ड १६ वर्षपछि विश्वकप मैदान देखिने छन् । खेलेका तीन खेलमध्ये तीनवटैमा जित हात पारेको न्युजिल्यान्ड र उत्कृष्ट लयमा देखिएको भारतबीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ । विश्वकपमा यी दुई टोलीको भेट १६ वर्षपछि हुन लागेको हो । यसअघि भारत र न्युजिल्यान्डबीचको भेट सन् २००३..
काठमाडौं, २९ जेठ । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अष्ट्रेलियाले तेस्रो जित दर्ता गरेको छ । ३ सय ८ रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान ४५ दशमलव ४ ओभरमा २ सय ६६ रनमा अलआउट भएपछि अष्ट्रेलियाले तेस्रो जित निकालेको हो । पाकिस्तानका लागि इमाम उल हकले अर्धशतक बनाए पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन् । ७५ बल खेलेका इमामले ७ चौकाको मदतमा ५३ रन बनाए । मोहम्मद हफिजले..
एजेन्सी, २९ जेठ आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तगर्त १७ औं खेलमा अष्ट्रेलिया र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पाँच पटकको च्याम्पियन अष्ट्रेलिया ३ सय ७ रनमा अलआउट भएको छ । विशाल लक्ष्य जोडेको अष्ट्रेलियाविरुद्ध पाकिस्तानका एक बलर चम्के । जसले कप्तान आरोन फिन्चसहित पाँच ब्याटसम्यानलाई पवेलियन फर्काए । उनी हुन् २७ वर्षीय मोहम्मद अमिर । जो एकदिवसीय क्रिकेट करिअरमा ५४ औं खेल खेलिरहेका..
काठमाडौँ, २९ जेठ । चौंथो संस्करणको ललित स्मृति अठार वर्षमुनि (यु–१८) फुटबल च्याम्पियनसिपमा न्यूरोड टिम (एनआरटी)ले च्यासल युथ क्लबलाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद शुरुआत गरेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको उद्घाटन खेलमा एनआरटीले च्यासललाई ४–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सुखद शुरुआत गरेको हो । एनआरटीको जितमा राजन माझीले पहिलो गोल गर्दै खाता खोले । उनले खेल सुरुआती एक मिनेटमा..
एजेन्सी, २८ जेठ आइसिसी क्रिकेट विश्वकप २०१९ अन्तर्गत बंगलादेश र श्रीलंकाबीचको खेल पनि रद्द भएको छ। इंग्ल्यान्डको ब्रिस्टोफमा तय भएको खेल वर्षाका कारण प्रभावित बनेको हो। वर्षाका कारण खेल टस नै नगरी रद्द गरियो। स्थानिय समयअनुसार दिउँसो २ बजेसम्म वर्षा जारी रहेको थियो। यसअघि दक्षिण अफ्रिका र वेस्ट इन्डिज तथा पाकिस्तान तथा श्रीलंकाबीचको खेल पनि वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। एकै विश्वकपमा तीन खेल..
काठमाडौं, २८ जेठ भारतीय ओपनिङ ब्याट्सम्यान शिखर धवनले इंग्ल्यान्डमा जारी विश्वकप क्रिकेटका कम्तीमा दुई खेल गुमाउने भएका छन् । अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेलकाक्रममा औंला भाँचिएपछि उनले कम्तीमा दुई खेल गुमाउने भएका हुन् । सो खेलमा धवनले ११७ रन बनाएका थिए । चोट लागेपछि उनी फिल्डिङ गर्नसमेत मैदानमा आएका थिएनन् । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई)काअनुसार धवनले बिहीबार हुने न्यूजिल्यान्डविरुद्ध र असार १ गते हुने पाकिस्तानविरुद्धको अहं खेल खेल्न..
एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट : श्रीलंका VS बंगलादेश, दुवै टिम दोस्रो जितको खोजीमा
काठमाडौं, २८ जेठ । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा मंगलबार श्रीलंकाले बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । ब्रिस्टोलस्थित काउन्टी ग्राउन्डमा नेपाली समयअनुसार ३ बजेर १५ मिनेटमा श्रीलंका र बंगलादेशबीचको खेल सुरु हुनेछ । दवै टिमले समान तीन–तीन खेल खेलेका छन् । श्रीलंकाले खेलेको तीन खेलमध्ये एक खेलमा जित एक खेलमा हार र एक खेलमा वर्षाको कारण अंक बाँडेको छ । श्रीलंकाको टिममा दिमुथ करुनरत्ने (कप्तान), धनन्जय डे..
नेयमार बिना पनि ब्राजिलको शानदार जित
काठमाडौँ, २७ जेठ । फिफा अन्तराष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा ब्राजिलले होन्डुरसमाथि आधा दर्जन गोल अन्तरले जित निकालेको छ । पोर्टो एल्गेरोमा भएको खेलमा ब्राजिलको जितमा गाब्रियल जिससले दुई गोल गरे । स्टार खेलाडी नेयमार विना नै मैदानमा उत्रिएको ब्राजिलले तुलनात्मक रुपमा कमजोर टिम होन्डुुरस विरुद्ध खेलको छैटौ मिनेटबाट गोलको बर्षा सुरु गरेको थियो । जुन ७० मिनेटसम्म कायम रहेको थियो । छैटाै मिनेटमा डानी..
पोर्चुगलले जित्यो नेसन्स लिग उपाधि
काठमाडौँ, २७ जेठ । पोर्चुगलले आइतबार राति नेसन्स लिग उपाधि जितेको छ । सन् २०१६ को युरोपेली विजेताले गोन्कालो गुडेसको गोलको मदतले नेदरल्यान्ड्सलाई १–० ले हरायो । डच डिफेन्डर जोडी भर्जिल भान डायक र म्याथिज डे लिटले क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पूरा खेल समय शान्त राखेपनि भ्यालेन्सियाका विन्गर गुडेसलाई रोक्न सकेनन् । गुडेसले ६० औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । पोर्चुगलले फाइनल प्रवेशका लागि स्विट्जरल्यान्डलाई..
विश्वकप क्रिकेट : भारतको अर्को जीत, धवनको शतक, अष्ट्रेलिया ३६ रनले पराजित
काठमाडौ, २६ जेठ । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्र्तगत आइतबार अबेर रातीसम्म भएको खेलमा भारत ३६ रनले बिजयी भएको छ । खेलमा जीतका लागि भारतले दिएको ३५३ रनको लक्ष्य पाउनबाट अष्ट्रेलिया चुक्यो । खेलमा अष्ट्रेलियो ३१६ मै अलआउट भएको थियो । खेलको सुरुमा ब्याटिंग गरेको भारतीय टीमले कुल ५० ओभर खेल्दै ५ विकेटको क्षतीमा ३ सय ५२ रनको विशाल योगफल तयार पारेको..
पोर्चुगल र नेदरल्यान्ड्स नेसन्स लिग उपाधिका लागि भिड्दै
काठमाडौँ, २६ जेठ यूइएफए नेसन्स लिग फाइनलमा पोर्चुगलले नेदरल्यान्ड्ससँग भिड्दैछ। उपाधिका लागि हुन लागेको खेल आइतबार राति नेपाली समयअनुसार साढे १२ बजे पोर्चुगलको घरेलु मैदानमा सुरु हुनेछ। पोर्चुगलले सन् २०१६ मा युरोकप जितेको थियो। नेदरल्यान्ड्समा भने उपाधिको भोक छ। पोर्चुगलले सन् २०१८ को विश्वकप खेल्दा नेदरल्यान्ड्स विश्वकपका लागि छनौट नै भएको थिएन। स्टार खेलाडीको फाइनल नेदरल्यान्ड्स र पोर्चुगलबीच हुन लागेको खेलमा स्टार खेलाडीको उपस्थिती हुनेछ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो..
विश्वकपको उपाधि दाबेदार टिम अष्ट्रेलिया र भारत आज भिड्दै
काठमाडौं, २६ जेठ । इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्समा जारी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज विश्वविजेता अष्ट्रेलिया र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेपाली समयानुसार दिउँसो ३ बजेर १५ मिनेटमा खेल सुरु हुनेछ । यो खेल विश्वकपकै सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनेछ । किनभने दुवै टिम विश्वकपको उपाधि दाबेदार हुन् । अष्ट्रेलिया लगातार तेस्रो खेलमा जित हात पार्ने लक्ष्यमा हुनेछ । यता, भारत भने दोस्रो..
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : आर्मीलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले जित्यो उपाधि
काठमाडौँ, २५ जेठ विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गर्दै तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि हासिल गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज भएको फाइनलमा मञ्जित श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको पुलिसले विनोद भण्डारीले कप्तानी गरेको आर्मीलाई चार विकेटले पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कपमा पहिलो पटक उपाधि हासिल गर्न सफल भयो ।..
प्रधानमन्त्री कप : फाईनलमा त्रिभुवन आर्मीक्लब र नेपाल पुलिस क्लब भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं, २५ जेठ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने फाइनलमा दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब शनिबार प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन् । दुवै टोली उपाधि जित्ने लक्ष्य सहित मैदान उत्रनेछन् । तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिको छिनोफानो आज हुँदैछ । यसअघिका दुवै संस्करणको फाईनल खेलेको आर्मीले रुपमा उपाधि उचाल्न सकेको छैन । यद्दपी पहिलो संस्करणको फाइनल..
इङ्ल्यान्डमाथिको रोमाञ्चक जितपछि पाकिस्तान श्रीलंकासँग खेल्दै, दुवै टिम दोस्रो जितको खोजीमा
एजेन्सी, २४ जेठ । आयोजक इङ्ल्यान्डमाथिको रोमाञ्चक जितपछि उत्साहित पाकिस्तान आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा शुक्रबार श्रीलंकाविरुद्ध खेल्दैछ । एकदिवसीय क्रिकेटमा पराजित क्रमलाई गत सोमबार इङ्ल्यान्डसँग जितसँगै समाप्त गरेको पाकिस्तान श्रीलंकाविरुद्ध खेल्न लागेको हो । बिस्ट्रोलस्थित कन्ट्री ग्राउन्डमा खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ बजे सुरु हुनेछ । पाकिस्तान र श्रीलंका दुबै दोस्रो जितको खोजीमा छन् । अफगानस्तानमाथि ३४ रनको जित निकालेको श्रीलंका विश्वकपमा भइरहेको कमजोर..
नेपाल र चाइनिज ताइपेको खेल बराबरीमा टुङ्गियो, नेपालद्वारा सुधारिएको प्रदर्शन
काठमाडौं, २३ जेठ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा चाइनिज ताइपेसँग १-१ गोलको बराबरी खेलेको छ । नेपालले चाइनिज ताइपेसँग १-१ गोलको बराबरी खेलको हो । नेपालका लागि अभिषेक रिजालले गोल गरे । खेलको पहिलो हाफमा नेपालले निकै दबाबमा खेलेको थियो । पहिलो हाफमा चाइनिज ताइपेले गोल गर्दै १-० गोलको अग्रता बनाएको थियो । गोलकिपर किरण चेम्जोङको गल्तिको कारण नेपालले गोल खान पुगेको थियो..
एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट : अस्ट्रेलिया र वेस्ट इन्डिजबीच प्रतिस्पर्धा
नटिङ्घम, २३ जेठ । इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्समा जारी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबार अस्ट्रेलिया र वेस्ट इन्डिजबीच खेल हुँदैछ । नटिङ्घमको खेल मैदानमा वेस्ट इन्डिजले टस जिती पहिले क्षेत्र रक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिका खेलमा वेस्ट इन्डिजले पाकिस्तानलाई र अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानलाई पराजित गरेका छन् । वेस्ट इन्डिजको टिममा जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, साई होप, ई लेविस, एन पूरान, एस..
विश्वकप क्रिकेट : भारतलाई पहिलो खेलमै ६ विकेटको जीत, रोहितको शतक
२२ जेठ । भारतले जारी विश्वकपमा जीतका साथ आफ्नो खाता खोलेको छ । पहिलो खेलमा साउथ अफ्रिका बिरुद्ध उत्रिएको भारतले साउथैम्पटन बाउल स्टेडियममा खेलिएको खेलमा दक्षिण अफ्रीकालाई ६ विकेटले हराएको हो । खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिंग रोजेको दक्षिण अफ्रीकाले कुल ५० ओभर खेल्दै ९ विकेटको क्षतीमा २२७ रन जोडेको थियो । जीतका लागि २ सय २८ रनको लक्ष्य लिएर उत्रिएको भारतले ४७..
फिफा अध्यक्षमा फेरी जियानी ! एन्फा पदाधिकारीले लगाइदिए नेपाली टोपी
काठमाडौँ, २२ जेठ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको अध्यक्षमा पुनः गियनी इन्फान्टिनो निर्वाचित भएका छन्। पेरिसमा बुधबार भएको फिफाको साधारणसभाले ४९ वर्षिया इटालीका इन्फान्टिनोलाई २०२३ सम्मका लागि दोस्रो कार्यकाल फिफाको अध्यक्षमा चुनेको हो। २०१६ मा पहिलो पटक निर्वाचित भएका उनले २०२६ मा हुने विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीको संख्या ३२ बाट ४८ पुर्याएका थिए। २०२६ को विश्वकप अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा हुँदैछ। कतारमा २०२२ मा..
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : प्रदेश ३ लाई हराउँदै आर्मी फाइनलमा
काठमाडौँ, २२ जेठ । प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटअन्तर्गत बुधवार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा प्रदेश नम्बर ३ लाई ११७ रनले पराजित गर्दै आर्मीले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो । पहिलो सिजनमा नेपाल पुलिससँग संयुक्त रुपमा विजेता बनेको आर्मी लगातार तेस्रो पटक फाइनल पुगेको हो । दोस्रो संस्करणमा भने आर्मी एपीएफसँग फाइनलमा पराजित भएको थियो । आर्मीले अब उपाधिका लागि भोलि हुने नेपाल पुलिस र..
विश्वकप एकदिवसीय क्रिकेट : उपाधि दाबेदार भारत पहिलो खेल दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध खेल्दै
एजेन्सी, २२ जेठ । आईसीसी विश्वकप एकदिवसीय क्रिकेटमा सातौं खेल सकिँदा उपाधि दाबेदार मानिएको भारत बुधबार पहिलो खेल दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध खेल्दैछ । इङ्ल्यान्डमा जारी सात खेलमा प्रतिद्वन्द्वीको नतिजालाई नियालेको फ्रेस टोली भारत विजय लक्ष्यका साथ दक्षिण अफ्रिकाकाविरुद्ध खेल्न लागेको हो । उत्कृष्ट प्रदर्शन तर हारको बाबजुद चोटमासमेत ग्रसित दक्षिण अफ्रिकामाथि भारतको लक्ष्य उत्कृष्ट जित रहेको छ । तर पराजित भएपनि रन राम्रो..
गृहमन्त्रालयद्वारा २६ सिडिओको सरुवा, कुन जिल्लामा को ?
काठमाडौँ, २२ जेठ । गृह मन्त्रालयले २६ जना सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा गरेको छ । सरुवामा १६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हेरफेर भएका छन् । गृहका अनुसार काभ्रेमा उदयबहादुर राना मगर, रुपन्देहीमा अर्जुनप्रसाद पोखरेल, कपिलवस्तुमा गजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नुवाकोटमा द्रोण पोखरेल, सर्लाहीमा कृष्णबहादुर राउतको सिडिओका रूपमा सरुवा भएको छ । त्यस्तै, रुकुम पश्चिममा उपेन्द्रकुमार पौडेल, रोल्पामा लक्ष्मण ढकाल, रोल्पामा कल्पना घिमिरे..
काठमाडौँ, २२ जेठ । भुटानको राजधानी थिम्पुमा आयोजना भएको पाचौं अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपालले चार स्वर्ण जितेको छ । च्याम्पियनसिपमा नेपालले चार स्वर्ण, एक रजत र दुई कांस्य जितेको वरिष्ठ तेक्वान्दो प्रशिक्षक नवीनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । महिला ४२ केजी जुनियरमा अनुज्ञा सापकोटा, पुरुष २४ केजी जुनियरमा इमोन राना, पुरुषकै ४२ केजी जुनियरमा अरुण तिवारी र पुरुषकै ७२ केजी सिनियरमा अर्जुनबहादुर सार्कीले..
दक्षिण अफ्रिकामाथी संकट : चाेटका कारण डेल स्टेन पनि विश्वकपबाट बाहिरिए
काठमाडौँ, २१ जेठ जारी विश्वकपमा लगातार दुई खेल गुमाएको दक्षिण अफ्रिकालाई फेरि अर्काे आपद् आइलागेको छ । यसअघि १० दिनका लागि लुंगी एन्गिडी विश्वकपबाट बाहिरिएका थिए । तर अर्का अनुभवी बलर डेल स्टेनले विश्वकप नै गुमाउने भएका छन् । आईपीएलमा घाइते भएका उनी ठिक नभएपछि यसअघिका दुई खेलनै गुमाएका थिए । दक्षिण अफ्रिकाका बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर ब्यूरेन हेन्ड्रिक्सलाई टिममा बोलाइएको छ..
प्रधानमन्त्री कपमा सुदूरपश्चिमलले गण्डकीलाई हरायो
काठमाडौँ, २१ जेठ राजधानीमा जारी तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमाञ्चलले गण्डकी प्रदेशललाई चार विकेटले पराजित गरेको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकी प्रदेशले सुदूरपश्चिमाञ्चलाई ९० रनको सामान्य लक्ष्य दिएको थियो । ९० रनको विजयी लक्ष्य लिएर मैदान उत्रेको सुदूरपश्चिमाञ्चलले २९ दशमलव २ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर भेट्टायो..
विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानसँग इङ्ल्यान्ड पराजित
काठमाडौँ, २१ जेठ । पाकिस्तानले विश्वकप क्रिकेटको छैटौँ खेलमा इङ्ल्यान्डलाई पराजित गरेको छ । पाकिस्तानले सोमवारराति विश्वकपमा पहिलो जित दर्ता गराएको हो। उसले नटिङ्घमको ट्रेन्ज ब्रिज स्टेडियममा खेलिएको खेलमा इङ्ल्यान्डलाई १४ रनले हराएको हो । इङ्ल्यान्डले टस जितेर बलिङमा गएको थियो । पाकिस्तानले पहिले ब्याटिङ गर्दै ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ३४८ रन बनाएको थियो। लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्ड ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै..
Results 1924: You are at page 23 of 65